သမိုင်းဝင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ပန်းခြံ ပြန်လည်ရရှိရေး ကမာရွတ်စည်ပင်ရုံးရှေ့တွင် တစ်ကိုယ်တော် ? - Yangon Media Group
သမိုင်းဝင် ရဲ ဘော်သုံးကျိပ်ပန်းခြံ ပြန်လည်ရရှိ ရေးအတွက် ကမာရွတ်မြို့နယ်စည် ပင်ရုံးရှေ့တွင် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတစ်ဦးက တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကာ ပြည်သူ ၁၅ဝ ခန့်ကဝန်းရံခဲ့ကြသည်။ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို ဧပြီ ၄ ရက် ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်နေ ဦးရဲဝင်းဆိုသူက ဦးဆောင်၍ ကမာရွတ်မြို့နယ် အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် အုပ် ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့မှ ယင်းရပ်ကွက် လှည်းတန်းလမ်းမဘက်အခြမ်း၊ စည်ပင်ရုံးဟောင်းရှေ့အတိုင်း သွား ရောက်ကာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့၌ ဟော ပြောမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်းမပေါ်ရှိ ပန်းခြံလမ်းနှင့် လင်း ရောင်ခြည်လမ်းကြားရှိ မြေနေရာသည် ယခင်က ရဲဘော်သုံးကျိပ် ပန်းခြံဖြစ်ပြီး ပြည်သူပိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ဦးရဲဝင်းက ”ဒီနေရာသည် ရဲဘော်သုံးကျိပ် ပန်းခြံ။ ခုလည်း ကျတော့ ဒီဟာ က ကွန်ဒိုကြီးပေါ်လာတယ်။ ကားပါကင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပါလာတယ်။ ဒီဟာက ပန်းခြံမြေ ပေါက်ထားတာ။ ဒီနေရာမှာ ပန်းခြံပဲပြန်လို ချင်တယ်။ အဆောက်အအုံ မလိုချင်ဘူး” ဟု မီဒီယာများကို ပြောသည်။ အဆိုပါမြေနေရာတွင် ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ပန်းခြံဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး နောက် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်စည်ပင်ရုံး တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ဝန်းရံပြည်သူတစ်ဦးက ”ကျွန် တော်တို့ဖြစ်ချင်တာက ၁၉၅၇ ခု နှစ်က ဒီနေရာမှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ပန်းခြံဆိုပြီးတော့ ဗိုလ်မှူးအောင်ချပေးခဲ့တဲ့ ပန်းခြံကို ယနေ့ဒီမိုက ရေစီ အစိုးရလက်ထက်မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ပန်းခြံအဖြစ်ပဲ ပြန်မြင်ချင်တယ်”ဟု မီဒီယာများကို ပြော သည်။ ပန်းခြံမြေနေရာ ပြန်လည်ရ ရှိရေးအတွက် ထပ်မံတောင်းဆိုမည်ဖြစ်ကာ လွှတ်တော်အသီးသီး သို့လည်း တင်ပြသွားမည် ဖြစ် ကြောင်း ဦးရဲဝင်းက ပြောသည်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ် ပန်းခြံဟောင်း မြေနေရာပြန်လည် ရရှိရေးနှင့် ယင်း မြေပေါ်တွင် ပန်းခြံအဖြစ်သာ ပြန် လည်တည်ဆောက်ပေးရေးကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုနှစ် မတ် ၂၈ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ မြို့တော်ဝန်ဦးမောင် မောင်စိုးထံ လိပ်မူပြီး မြို့နယ်နေ ပြည်သူလူထု ၂၈၇ ဦး လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် စာပေးပို့ထား ကြောင်း၊ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ထံသို့လည်း စာများပေးပို့ထား ရာ အကြောင်းပြန်စာ တစ်ခုမျှ မရ သေးကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
အဆောက်အအုံစီမံကိန်းကို အများပြည်သူသို့ ချပြခဲ့ခြင်းမရှိသ ဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိကြောင်း ပေးပို့ထားသည့် စာထဲတွင် ပါရှိသည်။ ကမာရွတ်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဝင်းက ”မြေနေရာကရပြီ။ ဒါကို အရင်အစိုးရ အဆက်ဆက် က ပြည်သူတွေရဲ့ အနားယူအပန်း ဖြေတဲ့ ပန်းခြံကိုသိမ်းသွားလို့ ဒီဟာကို ပြန်တောင်းတာ။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က နောက်ငါးနှစ်မှာ ရန်ကုန် မြို့တော်သည် စီးပွားရေးမြို့တော် ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့် မီ မြို့တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည် မှန်းချက်ရှိတယ်။ စီမံကိန်းတွေကို ဆောက်တဲ့အခါမှာ နောက်ငါးနှစ်ကို အကျိုးမျှော်မှန်းပြီးတော့ အဆင့်မီ ဆောက်ရမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် တွေရှိတယ်။ ပြန်တောင်းတဲ့အခါ အဆင့်မြင့်အပန်းဖြေပန်းခြံလုပ် ပေးပါလို့ ပြန်တောင်းတာ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြအတည်ပြုချက်ဖြင့် ယခုပန်း ခြံမြေနေရာတွင် အထပ်ရှစ်ထပ်နှင့် အထပ် ၁၃ ထပ် အဆင့်မြင့် အဆောက်အအုံနှစ်ခုကို တည် ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အပြီးတည်ဆောက်မည်ဟု မှန်းထား ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ဆန္ဒပြရာ၌ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ပန်းခြံ ပြန်လည်ရရှိရေး၊ ပြည်သူပိုင်မြေများ မဆုံးရှုံးရေး၊ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ပြည်သူ့ဆန္ဒ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရေးြေ<ွကးကြော်သံသုံးချက်ဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ဥပဒေနှင့် အညီ တရားဝင် စာပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်ရာ မတူကြသော်လည်း နှလုံးသားချင်းတူသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်ချင်ဟု န
သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီကို တည်ထောင်ခွင့်ပြု
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ရေစီးဖြင့်မျောပါလာသူ လူငယ်တစ်ဦးအား ဆယ်ယူ၍ ဝိုင်းမော်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်
မြောက်ဥက္ကလာပတွင် အိပ်ပျော်နေသူကို လူသုံးဦးကနေအိမ်ပေါ်တက် တုတ်နှင့်ရိုက်နှက်ပြီး ဓားဖြင်??